Halkan waxaa ah noocyada dharka dabbaasha ee adiga loogu talagalay adiga oo raacaya calaamaddaada astro-telo relay
Sanadkan waxaan kugu casuumeynaa inaad ogaato nooca suufka dabbaasha ee laguu sameeyay adiga oo ku saleynaya calaamaddaada astrological!
Astrology had iyo jeer way kala qaybsamaa laakiin hal shay ayaa hubaal ah, waxay wali tahay mawduuc inbadan soo ifbaxa, gaar ahaan marka fasaxa xagaaga uu soo dhowaanayo qof walbana naftiisa ku tuura horoscope-kiisa si aan u ogaano bal inaan ugu dambeyntii qaban doonno burburkayaga! Iyo in sidaas la sameeyo, waxaa fiican inaad ahaato ugu badnaan, tani waa sababta ka dib markii aan kugula talinay shaqo meesha aad ka dalban lahayd iyadoo la raacayo astroonkaaga astro waxaan dib ugu laabanaynaa waqtigan xulashooyinka dabbaasha. Hagaag haa, hadaad rabto inaad soo jiidato dareenka jajabintaaga waxaa fiican inaad xirato funaanad sifiican ugu habboon shakhsiyaddaada. Kaalay, hoosta ka daawo si aad u ogaato talooyinkeena.
Dhibcaha: Calvin Klein
Aries waa calaamad dabeed sidaa darteed hadaad mid tahay, waxaad kuxiran tahay inaad tahay qof ganacsi oo leh dabeecad muqadas ah, markaa waxaad ubaahantahay dharka dabaasha oo leh midab "xoog": casaan ah. El fuego!
Sida is-ixtiraamka wanaagsan ee Taurus, waa inaad doorataa dharka dabaasha cagaaran. Midabkani wuxuu u taagan yahay rajo, jacayl, pragmatism: qiyamka muhiimka kuu ah adiga iyo kan kuu qeexaya si la yaab leh.
Waxaan kugu arki karnaa adigoo xeebaha ku dul socda oo ku dhex dabaalanaya dharka dabbaasha Waxaad ubaahantahay midab dhalaalaya, iskiis ah oo ka turjumaya shaqsiyadaada. Kama baqaysid in lagu soo ogeysiiyo, lid ku ah!
Dhibcaha: Pretty Little Thing
Kansar ahaan waxaad tahay qof dabacsan, xishood badan oo xafidan. Taas awgeed ayaa laguugu arki doonaa dabaasha cad. Looma baahna in si faahfaahsan loo helo, ma jecleysid waxyaabaha sidaad u jeceshahay inaad bartaas gaadho!
Dahab! Hagaag haa, waxaad tahay boqoradda / boqorka xeebta waana taas fahamnay. Guud ahaanna xubnaha xubnaha boqortooyada waxay ku lebisan yihiin dahab sidaa darteed nama yaabine. Waxaad rabtaa in laguula socdo oo ha walwelin tani waa kiiska.
Zalando waxay kor uqaadaa qalab ay ku iibiso magacyada…
Dhibcaha: Tape à l'oeil
Waa inaad naftaada u soo iibsataa dharka sare ee buluuga lagu dabaasho. Ma tihid qof xad-dhaaf ah mana aha qasab inaad rabtid in laguula socdo isla mar ahaantaana waxaad dooneysaa inaad noqoto qof caadi ah sida nolol-maalmeedkaaga. Buluug mugdi ah ayaa u muuqda mid dhammaystiran tan! Caqli, xarrago, gaagaaban, dhammaantiin.
Waxaad tahay qof si aad ah u xiiseeya isbadallada sidaa darteed waa inaad ogaataa in sanadkaan midabkiisu inuu gabi ahaanba yahay buluug buluug ah. Laakiin isla waqtigaas lilac sidoo kale waa isbeddelayaa sanadkan? Roh / halkan wuu ka shakinyaa… Sidii caadiga ahayd!
Dhibcood: La Xayiray
Scorpionku waa mid dareen, dhadhan leh, qurux badan… Haddii aad dhalasho u tahay calaamadaan, dabaasha madow waxay kugu habboonaan doontaa. Way fududahay oo quruxsan tahay laakiin sidoo kale waa kacsan tahay ... Waxaad soo jiidan doontaa indhahaaga oo dhan oo hubaal hubaal ah.
Haddii aad tahay Sagittarius, dharka suufka buluuga ah ayaa kuugu habboon! Waxaad tahay qof faraxsan oo iskiis iskugu mid ah oo leh midabkan, tani waa gabi ahaanba waxa ay dadka kale dhahayaan marka ay arkaan adiga oo xeebta ku sugan.
Sida Capricorn ahaan waxaad tahay qof kalsooni leh laakiin sidoo kale taxaddar leh, sidaa darteed waxaan kugu arki karnaa dabool buluug ah. Waa mid asal ah, dad aad u yar ayaa leh hadana wali waa khayaano badbaado ah maxaa yeelay qof kasta ayuu u socdaa. Adiguna taas ayaa kaa farxin lahayd!
Waxaad u qalantaa inaad xidhato fuchsia casaan! Sabab? Hagaag, si fudud maxaa yeelay waxaad tahay qof liitaa. Waxaad dooneysaa in dadku ay kugu soo jiitaan muuqaalkaaga iyo fikirkaaga xitaa xeebta, marka la soo koobo, fuchsia casaan ayaa loogu talagalay adiga.
Casaan? Buluug khafiif ah? Lilac! Hal eray: hal abuur. Ma tihid nooca aad ku sameyso wax walba sida dadka kale oo dhan, xiitaa dharkaaga dabbaasha. Waxaad ka mid tahay kuwa jecel qaladnimada isla markaana aad sax u tahay maxaa yeelay adiga uun baa lagaa helayaa! Marka laga hadlayo midabada, dhab ahaantii waxaad jeceshahay midabada pastel oo jacayl u leh oo aad dareen badan tahay.
Maqaalkani wuxuu ugu horeyn u muuqday: https://trendy.letudiant.fr/mode-voici-les-maillots-de-bain-a-porter-selon-ton-signe-astro-a4898.html
Zalando waxay kor uqaadaa qalab ay ku iibiso iibka astaamaha elektarooniga ah…